သုံးစွဲနိုင်သူများ - ကလေးလူကြီးမရွေး သုံးစွဲနိုင်သည်။ နေပူလောင်ခြင်း၊ ဝက်ခြံ၊ ပိုမွှားငယ် ကိုက်ခံရခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Australia တွင် စိုက်ပျိုးသော သင်္ဘောသီးမှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် သဘာဝကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် papain ပါရှိ၍ အနာဒဏ်ရာကို သန့်စင် ပိုးသတ်ပေးနိုင်သည်။ Acid- alkali မပါရှိ၍ နူးညံ့သည်။ အသားရေကို စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်သည်။ Australia ၌ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း (၁ဝဝ)ကျော်ရှိ ဆေးဝါးကောင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များ - အရေပြား အရောင်ကျစေခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာ ပြန်လည်သက်သာခြင်းအတွက် ထူးခြားသော အစွမ်း ရှိသည်။ သေးငယ်သော အပူလောင်ဒဏ်ရာ၊ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ၊ အရေပြား နီပြီး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကြမ်းထော်ခြင်း၊ အသားကွဲခြင်းတို့ကို သက်သာစေသည်။ ကလေးငယ် diaper နှင်းခူများကိုလည်း လိမ်းနိုင်သည်။ နှုတ်ခမ်းအဆီတောင့်နှင့် လက်လိမ်းရန် ခရင်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြာဆူး၊ မိတ်၊ ပိုးကိုက်အဖုနှင့် ခြင်ကိုက်ဒဏ်ရာ၊ ဝက်ခြံများကိုလည်း သက်သာစေသည်။
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ - သင်္ဘောသီး ၊ potassium sorbate
သုံးစွဲနည်း - လိုအပ်ရာနေရာသို့ ပါးပါးလေး လူးလိမ်းနိုင်သည်။
Nature’s Super Protector. Made in Australia from Pure Australian Papawa.
သဘာဝစူပါစောင့်ရှောက်သူ- ၁၀၀% Australia သဘောၤသီးဖြင့် Australia ၌ထုတ်လုပ်ထားသော သဘောၤသီးလိမ်းဆေးဖြစ်သည်။
Lucas စူပါသဘောၤသီးလိမ်းဆေးသည် နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
Dr. Lucas သည် ရုက္ခဗဒေပညာနှင့်ဆေးဝါးပညာတွင် ထူူးချွန်ကျွမ်းကျင်သော လေ့လာမှုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိ ပြီး 1906 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသောစာအုပ်၌ သဘောၤသီးသည် လက်ရှိအကောင်းဆုံးပိုးသတ်ဆေးဖြစ် သည်ဟု ရေးဆွဲဖော်ပြထားသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ဖြင့် အဆိုပါဆေးသည် အနာကိုလျင်မြန်စွာပိုးသတ်သန့်ရှင်း စေသည်။ သဘောၤသီးပင်သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးကြီးဆုံးအပင်တစ်ပင် ဖြစ်သည်ဟုလည်း Dr. Lucas ယူဆထားသည်။ နမူနာပေါင်းထောင်ကျော်စမ်းသပ်ခဲ့ကာ သဘောၤသီးပင်ကို အလေးထားလေ့လာခဲ့ပြီး အရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်ရရှိခဲ့သည်။ သဘောၤသီးဆိုင်ရာဆေးဖြင့် ရောဂါများ စွာကို ကုသနိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းရာကျော်၌ သဘောၤသီးလိမ်းဆေးသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ ကုသမှုထိရောက် ကြောင်း အသိအမှတ်သဘောတူညီချက်များရရှိခဲ့သည်။
အိမ်တိုင်းတွင် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်သည့် ဆေးကောင်းတစ်မျိုး
Visitors : 288084